Ny hevitry ny vola miditra amin'ny fidiram-bola dia miavaka amin'ny fampientam-bolo tsy mampino, ka noho izany, na ho ela na ho haingana, ny hevitra hoe "te ho lasa mpampiasa vola" dia manatrika marobe. Ahoana anefa no hitrangan'izany raha toa ka maotina ny haben'ny renivohitra voalohany? Toa hita fa misy ny fomba hahatongavana ho mpampiasa vola avy amin'ny scratch, araka ny efa azontsika izao.
Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny mpampiasa vola tsy miankina?
Eo am-piandohana, ilaina ny mamaritra ny dikan'ny fanontaniana hoe "ahoana no hahatongavan'ireo mpampiasa vola mahomby avy amin'ny tabataba." Raha tsy ampy ny vola, tsy azo atao ny iraka, tsy maintsy misy ny fepetra ilaina. Saingy raha ny dikan'ny hetsika toy izany sy ny fahalalàna ankapobeny momba ny fampiasam-bola dia tsy maintsy misy ny zava-misy marina. Ny zava-dehibe dia ny tsy manadino ny famoronana tahirim-bola ary tsy hampiasa vola amin'ny hevitra iray.
Mba hahafahanao ho mpampiasa vola dia afaka mampiasa ireto fitaovana ara-bola manaraka ireto ianao:
fanokafana orinasa any amin'ny banky hamoronana sy hitazona tahiry ara-bola;
fanangonam-bola avy amin'ny orinasa fitantanana;
mampiasa vola amin'ny metaly sarobidy;
fanokafana kaonty brokerage.
Ny fomba roa farany tokony horesahina amin'ny antsipiriany, satria izy ireo dia mampanantena ny fitomboan'ny kapitalina haingana sy manan-danja.
Ahoana no hahatonga azy ho mpampiasa vola amin'ny fananan-tany?
Voalohany dia mila manapa-kevitra ianao hoe inona no fananana hiara-miasa aminao - ara-barotra na trano. Ny karazana voalohany dia mety ho azo tsaratsara kokoa, saingy mitaky fahalalàna tsara momba ny tsenam-barotra, na izany aza, ny tsy fisian'ny fanonerana dia afaka mahazo alalana amin'ny fifandraisana amin'ny orinasa mpamatsy vola.
Misy tetika telo malaza indrindra amin'ny fiasana amin'ny tany.
Fividianana ny fivarotana aoriana, fidiram-bola avy amin'ny vidiny.
Fividianana - fialokalofana ao amin'ny banky sy fanofana - fividianana - fiantohana sy famelana.
Ity rafitra ity dia nindramina avy any andrefana ary mety tsara amin'ny fahazoana vola miditra amin'ny fananganana trano marobe amin'ny tsy fisian'ny vola aloa amin'ny fividianany. Marina, ao amin'ny Ny latabatra hampihatra izany dia tsy ho mora, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia tsy misy afa-tsy ireo izay manana fifandraisana tsara amin'ny banky mba hametrahana tahan'ny bemidina amin'ny trosa.
Ahoana no hahatonga azy ho mpampiasa vola amin'ny tany tianao hofidiana, nefa mila mandanjalanja ny zava-drehetra mihoatra ny indray mandeha, satria raha tsy mitombina dia ho very ny vola.
Ahoana no hahatonga azy ho mpampiasa vola amin'ny Forex?
Ny fiasa amin'ny Forex dia manana risika avo lenta, izay manome antoka ny fahamendrehany. Lasa tsotra ny mpampiantrano - ampy ny mifidy broker (tsara kokoa noho ny maromaro), hiditra ao amin'ny tranonkala ary hameno ny kaonty. Aorian'izany dia afaka manankina ny volanao amin'ny manampahaizana ianao na manandrana ny tenanao ho toy ny mpivarotra.
Ahoana no hianarana hamonjena vola?
Inona no atao hoe fampindramana ary ahoana no maha samy hafa ny fampindramam-bola amin'ny fananana orana?
Ny mpanjifa lehibe - iza izy ireo, ny karazana, ny tsy fisian'ny asa, ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny mpanjifa lehibe
Fomba amam-pahaizana momba ny fandresen-dahatra amin'ny adihevitra
Mitsangàna ho amin'ny fitaovana
Church of St. John (Cesis)
Pizza fast ao anaty fantsom-bokatra - recipe
Adenoiditis - soritr'aretina
Famoronana ao amin'ny kilasy fianarana
Zarao miaraka amin'ny alexandrite amin'ny volamena
Akanjo jiro - sary miloko amin'ny endrika samihafa
Tsiranoka amin'ny atiny amin'ny aty
Fitovozan-kevitra manaitra: 25 mahery ireo mpanao sariitatra maherifo